Soosaarayaasha Soosaarayaasha iyo Warshadaha Ugu Fiican & Tandem Wada | Hadal
Gawaarida Kali ah & Tandem ayaa wada Seddex marxaladood, usheeda dhexe xawaare hooseeya oo godan, qeybta qalabka kala geddisan ee loo yaqaan 'bevel-helical gear' Wadayaasha hal iyo tandem-ka ayaa kufiican dib u dhiska mashiinka iyo waraaqaha, taas oo ay ugu wacan tahay rakibiddooda fudud iyo dhaqsaha leh iyo dayactirka hooseeya. Fikradda keliya ayaa wadata hal silsilad qalajiyaha oo leh hal koronto oo koronto ku qalabeysan oo leh hal dhimaye darawal leh oo leh cudud gacan qabsi ah. Naqshadeynta tandem-kayadu waxay kaxaysaa labo dhululubo qalajiyaha oo leh hal koronto oo koronto ku qalabeysan oo hoos u dhigaya tandem drive. Qulqulka ...
Gawaarida Kali ah & Tandem
Saddex marxaladood, mashiinka xawaaraha hooseeya ee godan, qaybta qalabka bir-gooyada
Gawaarida hal iyo tandem ayaa ku habboon dib-u-dhiska mashiinka iyo waraaqaha, taas oo ay ugu wacan tahay rakibiddooda fudud oo dhaqso leh iyo shuruudaha dayactirka oo hooseeya.
Fikradda keliya ayaa wadata hal silsilad qalajiyaha oo leh hal koronto oo koronto ku qalabeysan oo leh hal dhimaye darawal leh oo leh cudud gacan qabsi ah. Naqshadeynta tandem-kayadu waxay kaxaysaa labo dhululubo qalajiyaha oo leh hal koronto oo koronto ku qalabeysan oo hoos u dhigaya tandem drive. Darawalku wuxuu ka kooban yahay laba qalab oo hoos u dhig ah, kuwaas oo isku xira iyada oo loo marayo isku xirnaanta birta dhexdhexaadka ah iyo birta falcelinta. Maaddaama xiriirku u oggolaanayo oo keliya dhaqdhaqaaq xadidan oo u dhexeeya unugyada qalabka, khaladaad yar ama runout joornaalada silsiladda ah ayaa loo dulqaadan karaa.
Max awoodda waxqabadka 300 kW
Isafgarad, iswaafaqsan oo qaabaysan
Qaybta wadista tandem-ka waxaa lagu dhejin karaa jihooyin jiifa, toosan ama xagal ah. Cutubku waa mid is haysta oo haddana isu-eg oo ku habboon qaababka iyo cabbirka kooxda qallajiyeyaasha badankood. Fikradda sidoo kale waa qaab, sidaas darteed kooxo waaweyn ayaa lagu wadi karaa iyadoo la adeegsanayo dhowr cutub koox kasta. Dhimista gawaarida waxay kuxiran yihiin nidaamka saliidda dhexe. Qulqulka saliida ee loo baahan yahay waa 8 litir / daqiiqad cutub kasta oo marsho ah, yacni 16 l / min ah tandem drive. Unugyada sifaynta cadaadiska isukeenista ee ka kooban haanta saliidda, matoorrada, qaboojiyaha iyo qalabaynta ayaa loo heli karaa ikhtiyaar ahaan. Isku-xidhka isku-xidhka uumiga ee qalajiyaha ayaa lagu taageeri karaa mid ka mid ah guryaha qalabka wax lagu xiro ama qaab kale oo taageero ah Xidhiidhka aasaasiga ah ee u dhexeeya mishiinka korantada iyo qaybta wadista tandem-ka wuxuu noqon karaa mashiin guud, isku-xidhka qalabka korontada lagu dhejiyo ama birta isku-xidhka. Isku xidhka aasaasiga ah iyo ilaaliyaha nabadgelyada ayaa la siin karaa si ay ula kulmaan kiis kasta iyo shuruudaha gaarka ah.
Hore: Yankee Silsiladdu waxay wadataa sanduuqyada halbeegga
Xiga: X duubista filimka saliida duubista duurka